मैले प्रस्तुत गरेको बाटोबाट माघ ८ मै संविधान जारी हुन्छ - Enepalese.com
मैले प्रस्तुत गरेको बाटोबाट माघ ८ मै संविधान जारी हुन्छ
इनेप्लिज २०७१ पुष १८ गते १०:२० मा प्रकाशित
पछिल्लो समयमा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास चन्द्र नेम्बाङ्गले शिर्ष नेताहरुसँग संविधान बनाउन राखेको दुई प्रस्तावले उत्पन्न गरेको राजनीतिक प्रस्तावको विषयमा पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको कुराकानी
तपाईको प्रस्ताव त विवादमा पर्यो नि ?
विवादमा पर्यो भनेर अहिले नै भन्नु उपयूक्त हुँदैन । मैले माघ ८ गते संविधान बनाउने हो भने दलहरुहरु सामू दुई वटा प्रस्ताव राखेको छु । संविधान बनाउनु पर्छ, बनाउनुको विकल्प छैन । यदि तपाईहरुले पनि बनाउन चाहेको हो भने दुई वटा मेरा प्रस्तावहरु छन । पहिलो प्रस्ताव भनेको विषयमा सहमतिनै हो, यो मैले पहिलादेखिनै भन्दै आएको छु । अब सोमबार सम्ममा संविधानसभामा छलफल टुङ्गीन्छ । त्यसैले दुई घण्टामा सहमति गर्छौ भन्नु भएको थियो,सोमबारसम्ममा तपाईहरुले विषयमा सहमति गर्नुस, तपाईहरुलाई अझै पनि प्रसस्त समय प्राप्त छ । सहमतिको लागि छलफल गरिरहँदा एउटा कुरा ख्यालमा राख्नुस तपाईहरुले चार दिनमा सहमति कायम गर्न सक्नु भएन भने तपाईहरुले नियम निलम्बन गरेर बाधा अड्काउ फुकाएर संविधानको पहिलो मस्यौदा विद्येयक तयार गर्ने जिम्मा संविधानले तटस्थ संभाध्यक्ष बनाएको मलाई जिम्मा दिनुस । म कम्तिमा दश दिनभित्रमा संविधानको पहिलो मस्यौदा विद्येयक बनाएर पेश गर्छु । त्यसो गर्दा तपाईहरुलाई कुनै समस्या पर्दैन । त्यसपछि तपाईहरुले परिमार्जन र संसोधन गरे हुन्छ । तपाईहरुलाई सजिलो पनि हुन्छ भनेर मैले प्रस्ताव राखेको छु । त्यसो भन्दा उहाँहरुले हामी अहिले नै तपाईलाई यो अप्ठ्यारो बोक्न दिन्नौ । हामी सहमति गर्न सक्छौ त्यसैले अहिलेबाटै सहमतिमा लाग्छौ भन्नु भयो । दोस्रो प्रस्तावको बारेमा हामी सल्लाह गर्छौ भनेर भन्नु भएको छ ।
तपाईको प्रस्ताव त विवादमा पर्यो, काग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले तपाईसँग आजको दिनमात्यो अधिकार छैन भन्नु भयो ?
हो, आजको दिनमा त मलाई त्यो अधिकार छैन नै । उहाँले यस्तो निर्णय गर्दा मेरो कुनै आपत्ति छैन । तर मस्यौदा समितिको सभापतिको नाताले मस्यौदा गर्ने मेरो अधिकार कट्ने भयो भन्नु भयो । त्यो स्वभाविक कुरा हो । नियम निलम्बन भनेकै त्यही त हो नि । मेरो प्राथमिकता विषयमा सहमति दलहरुले नै गरुन भन्ने हो ।जहाँसम्म दोस्रो कुरा छ, तपाईहरुले सक्नु भएन भने म तपाईहरुको तर्फबाट जिम्मेवारी लिन तयार छु । भनेर भनेको छु मैले । म आफै यो भूमिका तपाईहरुले निर्वाह गर्नु पर्ने हो तर म तयार छु भन्छु भनेको हो । तपाईहरु आफै तपाईले केही गर्नु पर्दैन भनेर सोध्नु हुन्छ । सभाध्यक्षलाई त्यो अधिकार भन्दैमा प्राप्त हुँदैन । यो मामिलामा म भन्दा प्रष्ट कोही छ र ? मैले भनेको बाटो आफै प्रिय होईन । तपाईहरुले बाधा अडकाउ फुकाएर प्रधानन्यायधिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा त्यसको अन्तिमसम्म विरोध गर्ने मान्छे म हु । त्यसैले मेरोलागि यो प्रिय बाटो होईन । तर देश र जनताको लागि म कालकुट हलाहल विष पिउन तयार छु, सबै अपजस बोक्नको लागि तयार छु । संविधान बनाउनको लागि मलाई यो अधिकार दिनुस भनेको छु ।
तपाईलाई त्यो अधिकार दिन केके गर्नु पर्छ त ?
त्यो अधिकार मैले आफै लिन सक्दिन । संविधानसभाले मलाई नियम निलम्बन गरेर त्यो अधिकार दिनु पर्छ । बाधा अडकाउ फुकाउने आदेश जारी गरेर यो अधिकार दिनु पर्छ । कार्यब्यवस्थाले सहमति गर्छ र संविधानसभाले यो अधिकार दिन्छ भने अहिलेको जुन सम्पूर्ण समस्या छ त्यसलाई समाधान गर्नको लागि नियम निलम्बन गरेर तैले दश दिनभित्रमा विद्येयक प्रस्तुत गर भनेर अधिकार मलाई दिने यसो गर्दा समितिको मात्रै होईन, सभासदहरुले छलफल गर्ने अधिकार पनि कटौति हुन्छन । मलाई भन्दा राम्ररी कसलाई थाहाँ छ यो कुरा ।
काग्रेस एमालेले प्रक्रिया छाडेर भयंकर अलोकतान्त्रिक काम गर्दैछन भनेर एमाओवादीले आरोप लगाउन थालिसक्यो ?
सहमति पनि गर्न नसक्ने अनि अरु कसैले गर्छु भन्दा पनि गर्न नदिने त्यस्तो पनि हुन्छ ? मैले स्पष्टै भनेको छु, सकेसहमति गर्नुस, सक्नु हुन्न भने बनाउछु भन्नेलाई बनाउन अधिकार पनि दिनुस । मैले मस्यौदा विद्येयक बनाउँदैमा संविधान जारी हुने हो र । बनाएर संविधानसभामा पेश गर्नु पर्छ, त्यसमा संसोधन हाल्ने लगायतका कुरा गर्न सकिन्छ । नेपाली काग्रेसले त माघ ८ गते संविधान जारी गर्न नियमनिलम्बन लगायतका उपाय अपनाउने भन्ने कुरा भन्नु भएको छ । त्यसको लागि सबैमा समर्थन छ भनेर बाहिर बोल्नु भएको छ ।
तपाईले त असिमित अधिकार माग्नु भयो रे नि ?
असिमिति अधिकार संविधान बनाउनलाई होईन, संविधानको विद्येयक बनाउन मात्रै हो । त्यो विद्येयक बनाईसकेपछि संविधाननिर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रियामा संविधानसभा क्रियाशिल रहन्छ । दलहरुले दुई घण्टामा गर्ने काम जुगाँको लडाई बनाएर गरिरहेका छैनन । म भन्छु, उहाँहरुले नसकेको होईन, नगरेको हो । त्यो कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउनको लागि अब यही बाटो छ । यो बाटो मेरो रहर होईन, चार दिनमा सहमति गरेर देखाईदिए भई हाल्यो नि । सहमति गरे म त्यो बाटोमा जानै पर्दैन । कि गर्नुस, कि गर्न दिनुस ।
संविधानसभाले तपाईलाई अधिकार दिन मानेन भने ?
नमाने दलहरु आफैले गरे भई हाल्यो नि । दलहरुले संविधानसभाले त्यो अधिकार मलाई दिएन भने अहिले मैले जुन भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु । मैले फेरि पनि गर्ने त्यही नै हो । दलहरुले नसकेको होईन, नगरेका हुन । सबैले दलहरुले गर्नै पर्छ भनेर दवाव दिनु पर्छ ।
प्रचण्डले हामीले नै गर्नु पर्छ भन्नु भएको छ ?
हो, उहाँको भनाई चार दिनभित्र सहमति गर्न सक्छौ भन्ने तर्फ लक्षित छ । जिम्मेवारी उहाँहरुको हो, उहाँहरु असफल भए यो देशमा के हुन्छ । मैले यो प्रश्न गरेको छु ।
नेताहरुको कुरामा विश्वास छ ?
नेताहरुले बैठकबाट उठ्दाखेरी हामी अहिले नै तपाईहरुलाई कालकुट हलाहल विष पिउन दिदैनौ, त्यो हामी नै बाडीचुडी गछौ भनेर भन्नु भएको छ । अर्थात अहिले पनि सहमति हुन्छ, हामी त्यसमा लाग्छौ । तपाईले उत्पे्ररित गर्नु भएको छ, आजै बाट लाग्छौ भन्न खोज्नु भएको हो । मैले आज देखि चौविसै घण्टा छलफल गर्नुस, सहमति गर्न सक्नु हुन्छ भनेर सुझाव दिएको छ । गर्न नसके, माघ ८ गतेभित्र संविधान सबैले संविधान ल्याउने प्रतिबद्धता हो ।
यसमा कस्तो प्राक्टिस छ ?
हिजो संबाद समितिमा दलहरुले प्रतिवेदन बनाउन नसक्दा सभापति डा बाबुराम भट्टाराईलाई तपाई आफै गर्नुस भनेर दिएकै हो नी । उहाँहरुले आफ्नो अप्ठ्यारो फुकाउन सभापतिलाई जिम्मेवारी दिनुभयो । सभापतिले तपाईहरुको तर्फबाट प्रतिवेदन बनाएर संविधानसभामा ल्याउनु भयो । हो, त्यसै गरेर दिनु पर्यो । यो प्रिय बाटो होईन, भोली दलहरुले नसकेर मलाई दिएको आरोप आउला ।
तपाईले अधिकार पाए के हुन्छ ?
मैले अधिकार पाए अन्तरिम संविधान मेरो अगाडि छ, अहिलेसम्म संविधानसभामा दलहरुले खेलेको भूमिका मेरो अगाडि छ । संविधानसभाको प्रक्रियामा उठेका विषयहरु कसरी अगाडि बढेका छन, मेरो अगाडि छ, मस्यौदा समितिमा कसरी मस्यौदा प्रस्तुत भएको छ त्यो पनि मेरो अगाडि छ । के के विषयमा विवाद छ, त्यो मलाई थाहाँ छ । यो सम्पूर्ण कुराहरुलाई हेरेर संविधानसभाको एउटा मात्रै तटस्थ ब्यक्ति जसले आफ्नो कुरा अहिलेसम्म भनेको छैन । जसले कुनै विषयमा मतदान भए बराबर भएमात्रै भोट हाल्छ । त्यस्तो तटस्थ ब्यक्तिलाई तपाईहरुको तर्फबाट जिम्मा दिनुस । म ति सबैको आधारमा संविधानको विद्येयक बनाएर पेश गर्छु । तपाईले आफ्ना कार्यकर्ता र जनतालाई पनि भन्न पाउनु हुन्छ । अध्यक्षले यसरी ल्याउनु भएको छ भनेर । यो कुरामा हामी संसोधन गरेर अगाडि बढ्छौ भनेर सम्झाउनुस । यो दलहरुकै लागि सजिलो हुन्छ ।
माघ ८ मा मुलुकले संविधान पाउँछ ?
मैले प्रस्तुत गरेको दुई वटा बाटोबाट बनाउन खोज मुलुकले संविधान पाउँछ । नभए मुलुकले माघ ८ गते संविधान पाउँछन । यी दुई वाटोबाहेक प्रक्रियाबाट बनाउन खोजे लामो र जटिल हुन्छ, त्यती बेला माघ ८ गते मुलुकले संविधान पाउँदैन ।